मिडिया एनपी २, Author at Medianp - Page 77 of 120
रियल मड्रिड छोडेर मोराटा चेल्सी तिर
मिडिया एनपी २प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन ०५, २०७४०७:५४0
काठमाडौं, ५ साउन । रियल मड्रिडका स्ट्राइकर अल्भारो मोराटा इंग्लिस प्रिमियर लिग च्याम्पियन चेल्सीमा अनुबन्धित हुने भएका छन् । चेल्सी मोराटालाई झण्डै ६ करोड पाउण्डमा क्लब भित्र्याउन सहमत भएको बताइएको छ । २४ वर्षका स्पेनिस खेलाडी
समाजसेवी गुरुङ एनआरएन कोरियाको बरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार
मिडिया एनपी २प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन ०५, २०७४०७:३८0
दक्षिण कोरिया, ४ साउन । एनआरएन कोरियाका उपाध्यक्ष तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायी विपिन गुरूङले बरिष्ठ उपाध्यक्षमा उमेद्वारी दिने भएका छन् । विगत १७ बर्ष देखि कोरियामा रहेर व्यवसाय गरिरहेका गुरुङले १५ बर्ष देखि सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील छन्
अक्षयकुमार र रजनीकान्तको ४ सय करोडको फिल्म ‘२.०’, १० करोडको गीत, २०१८ मा रिलिज हुने
मिडिया एनपी २प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ०४, २०७४१४:५६0
काठमाडौं, ४ साउन । अक्षयकुमार र रजनीकान्तको फिल्म ‘२.०’ एकपटक फेरी चर्चामा आएको छ । यो पटक चर्चामा आउनुको कारण हो फिल्मको गीत । यो गीत बलिउडको सबैभन्दा महंगो गीत भएको बताइएको छ । जहाँ रजनीकान्त
यी अभिनेत्रीको नांगो भिडियो लिक !
मिडिया एनपी २प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ०४, २०७४१४:३१0
काठमाडौं, ४ साउन । फिल्म ‘दंडुपाल्या २’ को एक सीन लिक भएको छ । जसमा एक्ट्रेस सन्जना गलरानी नग्न देखिन्छिन् । पहिले यो सिन फिल्मका लागि शुट गरिएको थियो । तर सेन्सर बोर्डको आपत्तिपछि यो
क्रिकेटर क्रिस गेलको ‘च्यालेञ्ज’ सनी लियोनीले स्वीकारेपछि हंगमा ! (भिडियाे)
मिडिया एनपी २प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ०४, २०७४१३:३०0
काठमाडौं, ४ साउन। वेष्ट इण्डिजका ब्याट्सम्यान क्रिस गेलले केही दिनअघि गेलले सनी लियोनीको गीत ‘लैला मै लैला...’मा डान्स गर्दै सबै ट्वीटर प्रयोगकर्तालाई चुनौती दिएका थिए । उनले दिएको उक्त चुनौती बलिउड अभिनेत्री सनी लियोनीले स्वीकारेपछि अहिले
ऋतिक रोशनको ‘काबिल’लाई रिमेक गर्दै हलिउड
मिडिया एनपी २प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ०४, २०७४१३:१२0
काठमाडौं, ४ साउन । ऋतिक रोशनको सफल चलचित्र ‘काबिल’ को रिमेक चाँडै नै हलिउडमा आउने भएको छ । ‘ट्वेन्टिथ सेन्चुरी फक्स’ले रिमेक राइट्स किन्नका लागि ऋतिकसँग सम्पर्क गरेको भारतीय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन् । चलचित्रका निर्देशक
यो बर्ष पर्दामा नदेखिएका बलिउडका यी ८ स्टार, के फिल्म नपाएकै हुन् ?
मिडिया एनपी २प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ०४, २०७४१२:४८0
सन् २०१७ आधा वितिसकेको छ । बलिउडमा केही यस्ता स्टार छन जो अहिलेसम्म कुनै पनि फिल्ममा देखिएका छैनन् । जबकी उनीहरुले केही सुपरहिट चलचित्रमा काम गरेका छन् । को हुन् स्क्रिनमा नदेखिएका ८ स्टार ? १. ऐश्वर्या
एमाले नेता रिजाललाई मातृ शोक
मिडिया एनपी २प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ०४, २०७४१२:०४0
काठमाडौं, ४ साउन । नेकपा एमाले प्रचार विभागका सचिव विष्णु रिजाललाई मातृ शोक परेको छ । उनकी आमा डिल्लीसरा रिजालको बुधबार विहान भैरवी–५ दैलेख डाँगर गाउँस्थित आफ्नै निवासमा निधन भएको हो । बुधबार साप्ताहिकका पूर्वसम्पादक समेत
जुवाको खालबाट गायक बन्द्री पंगेनी रंगेहात पक्राउ
मिडिया एनपी २प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ०४, २०७४११:१९0
काठमाडौं, ४ साउन । जुवाको खालबाट गायक बद्री पंगेनी रंगेहात पक्राउ परेका छन् । काठमाडौंको बाँसबारी क्षेत्रबाट जुवा खेलिरहेका अवस्थामा गायक पंगेनीसहित ११ जना पक्राउ परेका हुन् । उनीहरुलाई मंगलबारराती पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
आफू पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै हुने वामदेवको दाबी
मिडिया एनपी २प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ०४, २०७४०९:४२0
काठमाडौं, ४ साउन । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफू अध्यक्ष भए मात्रै गुटबन्दी समाप्त हुने र नभए गुटबन्दी कायम हुने बताएका छन् । अहिले एमालेमा दुईओटा गुट रहेको र दुवै पक्षलाई मिलाउने क्षमता आफूसँग मात्रै